Bacela uxhaso ukuze kuzogcotshwa iNkosi | News24
Bacela uxhaso ukuze kuzogcotshwa iNkosi
KUNXENXWA umphakathi waseMaqongqo ngaphansi kweNkosi uNdabezitha Maphumulo ukuba belule isandla banikele ngalokho abanako ukuze kuzokwenziwa umcimbi wokugcotshwa kweNkosi kule ndawo.
Okwamanje le ndawo yengamelwe yiNkosi uNdabezitha Nhlakanipho Maphumulo osewagcotshwa kanti ozogcotshwa manje ngokusemthethweni uNdabezitha Baningi Maphumulo, njengongumkhulu wenkosi ekhona njengamanje.
Ngokusho kukaMnuz Maphumulo nonguNobhala weNkosi lena ezogcotshwa, uthe ukugcotshwa kweNkosi yesibili akusho ukuthi lena ekhona iyasuswa esikhundleni.
“Inkosi ekhona manje isancane kakhulu kanti inhloso yokuthi kugcotshwe inkosi yesibili ukuthi bakwazi ukusebenzisana basizane ekubuyiseni kahle imithetho kanye nenhlalakahle yabantu endaweni kwazise iNkosi lena endala inolwazi olunzulu.
“Bebevele besebenzisana nangaphambilini kodwa manje sifuna ukuthi agcotshwe naye ngokusemthethweni ngoba vele naye uyinkosi ngokwakhe,” kubeka yena.
Uthe kungokokuqala ukuthi kwenzeke into efana nalena kule ndawo kodwa wathembisa ukuthi akukho okutheni okuzoshintsha ngoba inhloso ukusiza umphakathi uphile kahle.
Uma ngabe kukhona ongathanda ukwelula isandla angaxhumana naye uMnuz Maphumulo enombolweni ethi: 073 6140 570 okanye bathinte uLucky enombolweni ethi: 079 290 7786.
I-account number yona imi kanje: Nedbank 4059 9630 0413.